Maraykanka:Kenya waxaan siineynaa Diyaarado Dagaal – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 9 July 2015
Nairobi ( Mareeg)-Safiirka dowladda Maraykanka u fadhiya Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya Robert Godec oo la hadlay warbaahinta Kenya ayaa sheegay in dowladda Maraykanka ay Kenya ka tageeri doonto la dagaalanka wax uu ku sifeeyay la dagaalanka argagixisada.
Robert Godec ayaa sheegay in weerarada Kenya ka dhaca aysan niyad jabin doonin dowladda Maraykanka, islamarkaana ay ka go’antahay Xukuumada Washiton in dhinacyadda dhaqaalaha sirdoonka laga caawiyo Xukuumadad Nairobi si ay awood ugu yeelato ka hortaga weeraradda dhaq dhaqaaqa Soomaaliya ay ka gaystaan gudaha Kenya.
Mr Godec oo hadalkiis sii wata ayaa xusay in dowladda Maraykanka ay kenya ugu deeqi doonta diyaarado iyo doomo dheereeya oo ay kula tacaasho argagixisada qatarta ku haysa amniga dalkeeda.
Safiirka Maraykanka ee Kenya ayaa ugu dambayn sheegay in sidoo kale dowladda kenya loo tababari doono ciidamo gaar ah oo ka hortaga, lana dagaalama dhaq dhaqaaqa Al Shabaab ee weeraradda ka fuliya dalka Kenya.
Hadalka dowladda Maraykanka ayaa imaanaya xili maalmihii aynu soo dhaafnay ay dalka kenya ka dhaceen weeraro qasaaro sababay oo ay fuliyeen Xarakada Al Shabaab ee ka dagaalanta Gudaha Soomaaliya.